Ingabe imiphumela yokuhlola ihlale inganembi? Okusemqoka ukwenza lezi zinto kahle | Xipingzhe
Ngabe imiphumela yokuhlola ihlale inganembi yini? Okubalulekile ukwenza lezi zinto kahle
Ngokuthuthukiswa komnotho nomphakathi, ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezahlukahlukene, ngakho-ke izimboni noma imikhakha efana ne-CDC, ukuhlolwa kokudla, izinkampani ezithaka imithi, izikhungo zocwaningo lwesayensi, ukuvikelwa kwemvelo kwemvelo, izinhlelo zamanzi, izinhlelo zepetrochemical, izinhlelo zokuphakela ugesi, njll. ilabhorethri. Ngasikhathi sinye, cishe yonke ilabhorethri ihlangabezane nenkinga efanayo, okungukuthi, ukunemba kwemiphumela yokuhlola kuhlale kunembile! Le yinkinga enkulu ngempela.
Izizathu zalesi simo zingafingqwa kanjena:
(1) Imithetho nemithethonqubo yelabhorethri idinga ukwenziwa ngcono ngokushesha
Ilebhu evuthiwe kumele ibe neqoqo lemithetho nemithethonqubo eqinile nephoqelelayo. Lokhu kubaluleke kakhulu. Uma kunezimo lapho izivivinyo zisebenza ngokwephula imithetho ngesikhathi sokuhlolwa, imishini egcinwe ngokungafanele, amarekhodi okuhlola okuxegayo, kanye nemvelo yokuhlola eyonakalisiwe, vele, izothinta ngqo noma ngokungaqondile ukunemba kwemiphumela yokuhlola.
(2) Ikhwalithi yamasampuli amathuluzi nama-reagents adingekayo ekuhlolweni ayifanelekile
Yize amalabhorethri amaningi emile ethekwini nabahlinzeki besikhathi eside ababambisanayo, awuqedanga umsebenzi wokwamukela ngesikhathi ngesikhathi bethola lezi zinto. Ezinye izinsimbi zokuhlola, ikakhulukazi izinsimbi zokulinganisa ezifana namashubhu okuhlola, izinkomishi zokulinganisa, amabhodlela angunxantathu, namabhodlela wevolumu, akutholakalanga ukuthi awafanelekile ngemuva kokuhlolwa okuphindaphindiwe. Ngaphezu kwalokho, isimo semithi enamaphutha, ama-reagents, nama-lotion sicashile futhi akulula ukusibona. Imiphumela yalezi zinkinga izobuyiselwa emuva kwimininingwane yokugcina yokuhlola.
(3) Izinkinga zokuhlanzwa kwamathuluzi nezitsha zaselebhu
Ukuhlanzwa okungenazinsalela kuyisidingo sokuhlaziywa okunembile kokuhlola. Kodwa-ke, amalebhu amaningi asenza umsebenzi wokuhlanza ngesandla. Lokhu akusebenzi nje kuphela, kepha futhi kuholela emazingeni emiphumela yokuhlola enzima futhi enzima nezibalo. Ngokuya ngemininingwane yocwaningo egunyaziwe, ngaphezu kuka-50% wokunemba kwemiphumela yokuhlola kuhlobene ngqo nenhlanzeko yezitsha ezisetshenziswe kulolo vivinyo.
Ngakho-ke, amaqembu afanele angenza ukuthuthuka okuphelele ngokuya ngalezi zinto ezingenhla, ezizothuthukisa ngempumelelo izinga lonke lelebhu yonke kubandakanya ukunemba kwemiphumela yokuhlola.
Okokuqala, kuyadingeka ukwenza ngcono uhlelo lwazo zonke izici zelabhorethri, wenze umsebenzi omuhle ekusunguleni nasekuqeqesheni ukuqwashisa okufanele kwamalungu eqembu lokuhlola, nokwenza nokuqapha okufanelekile. Gcwalisa amarekhodi okuhlola, ukhiphe imiphumela yokuhlola, bese usebenzisa lokhu njengesisekelo semivuzo, ukujeziswa nokubuyekezwa lapho kuvela izingxabano.
Okwesibili, gcina, ubeke ilebula, futhi uhlole imithi esetshenziswa kakhulu ne-glassware. Uma kutholakala ukuthi ikhwalithi iyasolisa, kufanele ibikwe eminyangweni efanele nakwabaholi ngokusingatha ngesikhathi ukuqinisekisa ukuthi ukuhlolwa akuthinteki.
Okwesithathu, sebenzisa i-glassware washer ezenzakalelayo ngokuphelele ukufaka esikhundleni semisebenzi yokuwasha ngesandla. Ukuhlanzwa okususelwa kumshini, okususelwa enhlamvini, nasekuhlakanipheni kwezinto zaselebhu umkhuba ojwayelekile. Njengamanje, amalabhorethri andayo ezweni lethu asebenzise uhlelo lokuhlanza kanye nokubulala amagciwane elabhoratri ukuze lizihlanze futhi zivale inzalo. Imishini yokuhlanza ehlobene, efana nochungechunge lwemikhiqizo ekhiqizwe yiHangzhou XPZ, ayisebenzi nje kuphela njengomuntu, yonga ezabasebenzi, amanzi namandla kagesi, okubaluleke kakhulu, ukusebenza kahle kokuhlanza kuhle kakhulu-yonke inqubo ifanelwe, imiphumela iyahambisana, futhi imininingwane eminingi iyalandeleka. Ngale ndlela, imibandela yokulungiswa kwemiphumela yokuhlolwa inikezwa ngezinga elithile.
Isikhathi Iposi: Aug-06-2020